Obere mgbanwe ise na-eme ka oru oma nke oma
Ọnụ ike iji rụọ ọrụ igwe eletrik karịrị afọ iri dịkarịa ala 30 ugboro mbụ ịzụta ego. Site na iji ike eme ihe na-akpata ihe ka ukwuu na ndụ niile, Marek Lukaszczyk nke moto na onye na-arụ ọrụ ụgbọala, WEG, na-akọwa ụzọ ise iji melite arụmọrụ moto. Nke ...
Ntughari ohuru nke akwukwo ahia nke 2020 na Asynchronous Motor Market mejuputara 103 na tebụl data, tebụl, eserese, na eserese nke dị mfe nghọta site na ngosipụta miri emi. Coronavirus Pandemic (COVID-19) emetụtala akụkụ niile nke ndụ n’ụwa niile. Nke a nwere le ...
Zhejiang Lijiu Motor Co., Ltd. (nke a na-akpọ "Zhejiang Lijiu Motor") dị na Taizhou, Zhejiang, oghere nke akụ na ụba nke onwe. N’ịdabere n’otu nnukwu akụ na ụba nke Yangtze River Delta, gburugburu ebe obibi ka mma. Ọ bụ naanị 2 ...